महाशिवरात्री,नाङ्गा जोगी र अश्लिलता – नेपालीपोष्ट
महाशिवरात्री,नाङ्गा जोगी र अश्लिलता
लेखनाथ भण्डारी, भर्जिनिया | February 13, 2018 | चौतारी | 1 Comment
पशुपति मन्दिर परिसर यतीखेर महाशिवरात्रिको माहौलले तातेको छ । शिवरात्रिका अन्य धेरै धार्मिक साँस्कृतिक पक्षहरूभन्दा दृश्यमा देखिने ३ वटा कुरा मुख्य छन् – १) जोगी/सन्यासीहरुको तमासा २) अवैध मानिएको गाँजाको प्रयोग ३) लाखौँ भक्तजनहरुको भिड । सम्भवत मानिसहरुको यती ठूलो भिड अन्य कुनै सन्दर्भमा कुनै पनि शहरहरुमा हुँदैन होला ।
अहिले केही साल यता आएर यहाँ जम्मा हुने जोगीहरुको नग्नता र अश्लिलताको प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । यस सन्दर्भमा मैले मेरा हजुरबुबाबाट सुनेको आँखाको हेराइ र मनको हेराइको एउटा कथा यस्तो पनि छ –
कुनै जमानामा बुद्धभन्दा पहिले नै पनि हुनसक्छ, दुई तपस्वी युवा कुनै कठिन साधना वा सत् व्रतमा थिए । उनीहरूले सत् व्रतको अबस्थामा कुनै पनि महिलाको आकर्षणमा पनि पर्न नहुने र महिलालाई कुनैपनि शर्तमा छुनै नहुने कबोल थियो ।
एक सँझ नदी किनारमा ती दुवै साधकको बास पर्यो । एक सुन्दर युवती साधकहरूको नजिक आएर बिलौना गर्न थालिन । दिउँसो म र मेरी मातासँग घाँस दाउरा लिन यो नदी तरेर आएकी थिएँ । घाँस दाउरा जोहो गर्ने अलमलमा हामी अलमलिएर यता उता भयौं । मलाई नदेखेपछि आमा एक्लै मलाई छाडेर केही पहिले नै नदी पार जानु भयो तर एकै छिनमा नदीमा बाड़ी आयो । अहिले यो बाडी छिचोलेर म नदि पार गर्न पनि सक्दिन तर म पारी जानैपर्छ । म यहाँ एक्लै बस्न सक्दिन । यहाँ जङ्गली जनावरहरुको मात्र होइन चोर डाकाहरुको पनि खतरा हुन्छ ।
युवा तपस्वीहरूले एकैछिन परस्परमा हेराहेर गरे । एउटाले मुख खोले । भन्दैथिए – हे युवती ! हामी साधकहरूको सत् व्रत बिथोल्ने तिम्रो षडयन्त्र पनि हुनसक्छ । तिमी साँच्चिकै अफ्ठेरोमा परेकी हौ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
उनका सबै कुरा सुन्नु त के कुरा उनका कुरा शुरु नहुँदै अर्का तपस्वी युवाले ती युवतीलाई काँधमा राखेर नदी पारी पुर्याएर फर्के ।
आफ्नो सत् व्रतको कथा सुनाउन थालेका तपस्वी युवाले युवतीलाई काँधमा राखेर नदी पारी पुर्याएर फर्कने तपस्वी युवालाई भने- मित्र तिमीले आफ्नो सत् व्रत साधनाको कबोल तोड्यौ । अब तिमी साधनाका लागि योग्य तपस्वी रहेनौ ।
तिमीले महिलाको आकर्षणमा पर्न र छुन पनि नहुने कबोल तोड्यौ ।
तिमीले भर्खरै एक सुन्दर युवतीलाई काँधमा बोकेर नदी पार गरायौ ।
अर्का युवा तपस्वीले भने- मैले त कुनै सुन्दर युवती नै देखिन । मैले आफ्नी आमाबाट हराएकी कुनै अबोध नाबालकलाई आमाको जिम्मा लगाइदिएर फर्केको
हुँ । तिमीले आफ्नो कबोल विपरीत किन कुनै सुन्दर युवतीलाई नियालेर हेर्यौ ?! यसरी युवतीलाई नियालेर हेर्नु तिम्रो सत् व्रत र साधनाको नियम विपरितको कार्य तिमीले पो गरेछौ !
shrawan	 February 12, 2018 Reply
लेखनाथजी, म पूर्णतह छु तपाइकाे बिचारसँग । मेराे बिचारमा जाेगीहरूको नग्नताकाे बिराेध गर्नु भनेकाे अहोरात्र यौन परिकल्पना गरने मनोरोगीहरूको रोगमात्र हो । सभ्यताकाे सुरुवातमा मानिस नांगै थिए । लंगाैटि मात्र लाएका मानिस हामी सबैले देखेकै हो । हजारौं त के लाख बर्ष मानिस नांगै नै थिए । शिवभक्त साधु जाेगीभन्दा नांगा त म दौरा सुरुवाल र सुट लाउने भाेगिहरु पो नांगा देख्छु म त ।